Wasaaradda Waxbarashada oo shaacisay Anshaxa Xiliga Imtixaanka 2017/18 – Daily Som
Anshaxa Ardayga Imtixaanka galaya
1. Kormeere, ilaaliye imtixaan, arday imtixaan-gale ah, waalid iyo xubin ka tirsan dadweynaha guud waxey soo sheegi karaan waxii la xiriira anshax-darro imtixaan haddii ay arkaan ama maqlaan.
2. Wasaaradda ayaa laga rabaa in ay samayso khad lagu soo diri karo macluumaadka wixii dadweynuhu u arko in ay khaldan yihiin iyagoo soo sheegaya. Qofka soo sheegaya macluumaadkaas waa in xogtiisu dhowrsan tahay, sida waa in la sameeyaa telefoon (cod duube leh), email, ama Farriin Qoraaleed Gaaban (FQG), kuwaasoo qof ku dhaafi karo farriin isagoo aan magaciisa sheegin.
Anshax Xumo Imtixaan
Arrimo badan ayaa noqon kara anshax xumo imtixaan gale. Waxaan tusaale u soo qaadaneynaa kuwa soo scoda:
1. Imtixaan-gale samaynaya qish, qof kale u qishaya, ilaaliye qish bixinaya, ama oggolaanaya in qish dhaco, ama samaynaya dayacaad qish ku dhici karo.
3. kormeere imtixaan oo u dabacsan in qish dhaco.
4. Musuq lagu sameeyo ama lagu raadiyo imtixaanka si qish ama wax is-dabamarin u dhacdo sida qof u galaya imtixaan qof kale, waraaqaha imtixaanka oo lagu qoro calaamad gaar ah oo baaq ka dhigan kaas oo lagu arko waraaqaha imtixaanka ee arday gaar ah iwm. In kastoo aysan ku koobneyn, qodobbada soo socda waxaa ka muuqda waxyaalaha loo aqoonsan yahay anshax-darro, haddii lagu helo imtixaan gale lagu baabi’inayo natiijadiisa; haddii lagu helo ilaaliye ama Kormeere lagula tiigsanayo sharciga. Anshax darro imtixaan kuma koonbna inta ku qoran liiskaan:
5. Minguurin qoraal arday kale leeyahay sidii kaagii oo kale.
6. Isu baaqid ama farriin isdhaafsi (diraha iyo loo diraha).
7. Xatooyo qoraalo qof kale (plagiarism).
9. Imtixaan-gale si ula kac ah loogu qoro xarun ilaaliyaha lala sii heshiiyey (improper assignment to centers).
10. Xarun imtixaan beeneed (ficticious exam centers)
11. Faragelin natiijo (deliberate alteration of marks)
12. Isticmaal buugaag, qoraallo, internet amail kale oo aan la siin tixraac sax ah.
13. In lagu qoro imtixaan luqad akhlaaqda ku xun sida aflagaado, anshax xumo kale, iwm.
Ciqaabta jabin qodobka anshaxa.
Haddii lagu helo in qodobka anshaxa uu jebiyey arday, ciqaabaha soo socda ayaa mid ama ka badan lagu qaadayaa:
1. In imtixaankaas loogu saxo eber (0%).
2. In laga reebo in uu qaybtaas imtixaankeeda galo.
3. In laga reebo imtixaanka maaddadaasoo dhan.
4. In laga reebo imtixaankaas oo dhan.
Arday imtixaan galaya waxaa si gaar ah uga reebban aanse ku koobnayn falalka soo socda:
1. In ardaygu ka soo daaho waqtiga imtixaanka la gelayo 31 daqiiqo iyo wax ka badan.
2. In uu qolka imtixaanka la galo buug iyo qoraallo kale.
In uu ku dhaqaaqo qish toos ah, ama mid dadban.
3. In uu eegto warqad kale.
4 In uu warqaddiisa tuso arday kale.
1. In uu caawiyo arday kale si toos ah iyo si aan toos ahayn intaba.
2. In lagu qabto macluumaad imtixaan oo meel kale laga keenay.
3. In gabdhaha imtixaanka gelaaya ay soo qaataan indhashareer inta imtixaanka lagu jiro. Waa in wejigooda la aqoonsan karaa inta imtixaanka lagu guda jiro oo dhan.
4. In ardaygu ka baxo qolka imtixaanka isagoo aan gacanta taagin loona fasixin.
5. in uu wax hub ah la galo qolka imtixaanka nooc kasta oo uu yahay hubkaasi min mudan ilaa qoray (dhab ama dheel sida hubka boombalaha ah)
6. In uu ku dhex hadlo imtixaanka.
7. In laga waayo waraaqihii imtixaanka (kuwii su’aalaha iyo kuwii jawaabaha) ee la siiyay midkood ama labadaba.
8. In laga waayo xarun imtixaan uu ku qornaa ama uu iska xaadiriyo xarun imtixaan kale isaga oo aan fasax ka haysanin guddoomiyaha goob imtixaan.
9. In uu ku soo noqdo qolkii imtixaanka marka uu ka baxo ka dib fasax la’aan.
10. Inuu la baxo waraaqaha imtixaanka ama kuwa jawaabaha sabab kasta.
11. In uu la soo galo goobta imtixaanka moobil iyo qalab kale oo elektaroonik ah.
12. In uu ku dul qoro waraaqaha imtixaanka, ee su’aalaha ama jawaabaha(magaciisa, ROLL LAMBAR iwm.)
13. Feegaarka waxa lagu qorayaa warqadda ugu dambeysa waraaqaha jawaabaha, waxaana lagu calaamadinayaa isku tallaab aan astaan laheyn.
Digniinaha Maalinta Imtixaanka
Digniintaan waa in lagu dhejiyaa meelo badan oo muuqda xarun imtixaan. Waxaa wanaagsan indugsiyada iyo dalladuhu ku soo baraarujiyaan arday dhaqanka imtixaan si arday ugu barbaaro ahmiyadda ay leedahay qish la’aan iyo ciqaabta ka dhalan karta qishka.
1. Waa in aad ku gashaa imtixaanka waqtigii loogu talo galay.
2. Waa in aadan ku lug yeelan fal qish iyo khayaano ku jirto imtixaanka.
3. Waa in aadan u gelin imtixaan arday kale.
4. Waa in aadan haysan wax qalab/alaab/shay/aalad nooc kasta kaasoo siin kara arday faa’iido uusan ula sinnayn ardada kale.
5. Haysashada mobile, buug, waraaqo wax ku qoran yihiin ama wax kale oo loo qaadan karo qish waa mamnuuc xitaa haddii aadan u isticmaali rabin qish. Haddii laguugu qabto waxaad halis u tahay in imtixaankaaga la tirtiro.
6. Waa in aadan hadlin imtixaanka dhexdiisa, la hadlin cid kale, isku deyin inaad la hadasho nooc kasta, sabab kasta.
7. Waa in aad adeecdaa tilmaamaha ilaaliye imtixaan.
Waxaa muhim ah in xarunta imtixaanaadka lagu dhejiyo digniino la xiriira in ay tahay mamnuuc in lasoo qaato qalabka electronics ah sida MOBILE, COMPUTER, IPAD, TABLET iwm.
Waxaa sidoo kale mamnuuc ah in la soo qaato buugaag iyo waraaqo ay ku qoran yihiin macluumaad qish ah.
Wasaaradda Waxbarashada oo shaacisay Anshaxa Xiliga Imtixaanka 2017/18 added by Staff on May 12, 2018